xasan kaahiye – Page 5 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
War deg deg ah-Madasha qaran oo war saxaafadeed soo saaray iyo 11 xildhibaan oo ladiidey.
December 25, 2016	Leave a comment 28 Views
Madasha qaran ee doorashada Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay saqdii dhexe ee xalay so saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayeen doorashada Soomaaliya. War-saxaafadeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in 11-kii xubnood ee gudiga xallinta khilaafaadku ay doorashadooda laaleen dib loosoo dooran doono. Waxaa sidoo kale laysku afgartay in 11-kaas ...
Dhacdo naxdin & La Yaab noqotay oo Muqdisho si aad ah looga hadal hayo..
December 24, 2016	Leave a comment 45 Views
Dhacdadaan oo noqotay mid si aad ah loo hadal haya ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho ka dib markii nin lagu sheegay inuu ahaa Taksiile meydkiisa laga helay gurigiisa mudo la maalin ka dib. Dhacdadaan oo ka dhacday degmada Waabari ee Gobolka Banaadir ayaa Ninka oo kaligii qof seexan jiray la helay meydkiisa habeenkii khamiista soo galeysay,waxayna ehelkiisa tilmaameen in labo ...
December 24, 2016	Leave a comment 29 Views
Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa wada qorshe Xasan Sheikh kaga cuna qabateynayo Xildhibaanada Hiiraan uga mataleysa Baarlamaanka Dowladda Soo socota. Ugaas Xasan ayaa kulan magaalada Baladweyne kula yeeshay qabaa’ilada kala duwan ee Gobolka Hiiraan dega,isagoo kala hadlay arimo ay ka mid yihiin masiirka Hiiraan iyo waliba sida ay ...
Sawirro Xasaasi-Madaxweyne Gaas iyo RW Cumar oo kulan gaar ah laqaatay barlamaanka kasoo jeeda…
December 23, 2016	Leave a comment 42 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa xalay kulan caasho sharaf ah ugu sameeyey magaalada Muqdhiso Xildhibaanada labada aqal ee Puntland u metelaya baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha waxaa kulanka ku wehelinaayey Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, masuuliyiin ka mida goloyaasha Dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland ...
December 23, 2016	Leave a comment 40 Views
Sawiradda Madaxweynaha Koofur Galbeed ahna Musharax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa lagu arkay waddooyinka Muqdisho, isagoo ku biiray boorarka sawirada Musharaxiinta ee la suray inta badan waddooyinka Muqdisho. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa raba inuu ka dhabeeyo qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku noqdo Musharax Madaxweyne oo rasmi ah, maadaama dadka qaar ay u arkaan riyo ay adag tahay inay ...
Puntland oo si yaab leh ugu jawaabtay Culimada Soomaaliyeed (AQRI)
December 23, 2016	Leave a comment 25 Views
Culimada Somaliyeed, ayaa ka hor timid tartan kubadda Kolayga ah oo gabdho matalaya maamul goboleedyada uga furmay magaalo madaxda Garowe, waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin ka hor imaanaysa shareecada Islaamka. Wadaadada, ayaa sheegay inay qorshahan uu yahay mid aan la aqbali karin islamarkaana lagu fasahaadinayo haweenka iyagoo tallaabadan ku sifeeyay mid ay ka dhalan karto carada EEBBE. Guddoomiyaha hay’adda ...
DEG DEG: Madaxda Galmudug, K/Galbeed & Hiirshabeele oo safar deg deg ah ku aaday Itoobiya & Sababta
December 23, 2016	Leave a comment 28 Views
Madaxda Maamul goboleedka Koofur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa maanta looga yeeray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kuwaasoo gelinkii dambe ee maanta hal diyaarad ka wada qaaday magaalada Muqdisho. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in safarka Shariif Xasan, C/kariin Xuseen Guuleed iyo Cali C/llaahi Cosoble uu la xiriiro arrimaha doorashooyinka. Wararka ayaa sheegaya in Itoobiya ay dooneyso saddexda ...
Maxaa ka socda Magaalada Boosaaso oo aadan ogeyn?
December 21, 2016	Leave a comment 40 Views
Wararka laga helayo Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in howlgallo xoogan ay ka socdeen qeybo ka mid ah Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari. Howlgalladan ayaa lagu micneeyay soo qabashada Raggii ka dambeeyay weerarkii lagu khaarajiyay Agaasimaha Madaxtooyadda Boosaaso, Aadan Gaas Haruuze. Saraakiisha Booliska ee Maamulka Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in tiro dad ah ay u soo qab qabteen howlgalladaasi. Weli ...
XOG: Nolosha Xildhibaanada cusub oo halis ku jirta & Shabaab oo hanjabay
December 21, 2016	Leave a comment 35 Views
Ururka Al-shabaab ayaa bilaabay iney u hanjabaan Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo hada badi ku sugan Muqdisho. Mid ka mid ah Xildhibaanada cusub oo diiday inaan inaan adeegsano magaciisa ayaa inoo sheegay soo waceen ururka Al-shabaab una sheegeen inuu faraha kala baxo wuxuu ku jiro, islamarkaana ay dili doonaan hadii uu ka madax adeego. Wuxuu sheegay in mudo 30-daqiiqo ...
Kulan Xasaasi ah oo dhexmaray Odayaasha S/land & Guddiga khilaafaadka
December 21, 2016	Leave a comment 28 Views
Guddiga xalinta Khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa kulan la yeeshay Odayaasha Dhaqan ee ka soo jeeda deegaanada Waqooyi. Kulanka ayaa muhiimadiisa lagu sheegay iney tahay xalinta kuraasta Baarlamaanka qaar oo muran adag uu ka taagan yahay. Guddiga Xalinta Khilaafka ayaa sheegay in Odayaasha maamulka Somaliland ay kala hadleen muranka ka jira doorashada xildhibaanada ka imaanaya degaanada maamulka Somaliland. Doorashada xildhibaanada Aqalka ...